Ainmat.com အိပ်မက်များ - Myanmar Burmese Blog - Myanmar Blog Links Collection | Home | Register | Authors | Rules | User Login | Contact Us | E-Mart | Other Blogs | Ainat Myanmar Blog Links [ Add A Link | List Pages ]
[ Previous Page | Current Page # 002 | Next Page ] Name( Myanmar / English ) Author Description 41. ရွှေဒါလင် blog All Things Myanmar Burmese shwedarling All Things Myanmar Burmese isablog for Myanmar/Burmese all over the world. Features various sections including News, Celebrities, Music, Poems, Photography and many more... 42. မောင်ကျော်ဇေယျ KyawZayYa ရောက်တတ်ရာရာလေးများ ဘာရယ်ညာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး....
ရောက်တတ်ရာရာလေးတွေကိုရေးသားထားခြင်းပါ... 48. kyaut daw ba lout myblog life \_" လောကမှာ ဖတ်ဖို့အလိုအပ်ဆုံး ဖတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံး ဖတ်စာအုပ်နှစ်အုပ် ရှိတယ် ၊ တစ်အုပ်က \_'မိမိကိုယ်\_' ဆိုတဲ့စာအုပ် ၊ နောက်တစ်အုပ်က \_'မိမိပတ်ဝန်းကျင်\_' ဆိုတဲ့စာအုပ် ၊ အဲဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကို သေသေချာချာဖတ်ပြီး အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်တွေးမယ်ဆိုရင် လောကမှာ အောင်မြင်နိုင်တယ် ၊ မြတ်စွာဘုရားဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို အဖတ်ကောင်းလို့ ဘုရားအဖြစ်ကိုရခဲ့တာပဲ\_" အရှင်ဆန္ဒာဓိက 52. ရန်အောင် Yan Aung ရန်အောင် အစုံလုပ်ချင်နေတယ်၊ လုပ်ရင်းနဲ့မှ ဘာကို ပိုစိတ်ဝင်စားပြီး လုပ်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း သိချင်နေတယ်၊ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ တွေးနေလဲ ဆိုတာတွေကို ဖော်ပြနေတဲ့ မော်ကွန်းလေးတစ်ခုပါ. နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် 53. ဇနိ znenith ဇနိ 54. သဲလေးနှင့်သူမ၏ကမ္ဘာ Thelay & Her own world သဲလေး သဲလေးနှင့်သူမ၏ကမ္ဘာ 59. သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင် My Soul Soul abt my feeling and thoughts. 61. မြန်မာ့ရိုးရာ အတိုင်ပင်ခံ ဗေဒင် Myanmar Traditional Astrology တေးအေးရိပ် မြန်မာ့ရိုးရာ အတိုင်အပင်ခံ ဗေဒင်
ဗေဒင်အချုပ်မဟာဘုတ်၊ အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ၊ ဆန်း ၊ ဂြိုဟ်အိပ်၊ သက်ခတ်၊ အမည်ပေး၊ အခါပေး၊ ဓါတ်ရိုက် ၊ ဓါတ်ဆင် အစရှိသည့် လက်ဆန်း ပညာခန်းများအား ရှေးပညာရှိများ၏ အယူအဆများ၊ မြန်မာ့ ဗေဒင်လောကတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဆရာများ၏ အယူအဆများ ဖြင့် ၀ိဇ္ဖာနည်းကျ အတွက်အချက် ၊ အတွေးအခေါ်များအား ခေတ်နှင့်အမှီ သိပ္ပံအမြင်များဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးများ၏ ကိုယ်ပိုင် မြန်မာ့ပညာရပ်များအား မြန်မာလူမျိုးတို့ ကိုယ်တိုင် လေးစား အထင်ကြီးစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
63. စိတ်ကူးပုံရိပ် Seit Ku Pon Yate ပုံရိပ် ရေးချင်လွန်း လို့ပါ။ 65. ရွှေမြန်မာ goldmyanmar yamin အားလုံးကို စိတ်ပျော်မှုများ ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျွန်မ စိတ်ထဲရှိတာတွေ၊ မြင်တာ တွေ့တာ ကြုံဆုံခဲ့သမျှကိုပါ။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကို ချစ်သောသူများအားလုံးအတွက် ရည်စူးခဲ့တာပါရှင်။ စိတ်ချမ်းသာမှုများကို ခံစားချင်တယ်ဆိုရင် အလည်တစ်ခေါက်လောက်တော့ ကြွခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ 66. အပိုင်းအစများ My Pieces မင်းယွန်းသစ် ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ် စာအုပ်တိုက်ကမှ လက်မခံတဲ့ (ပို့လဲမပို့ဖြစ်ပါဘူး) စာတွေကို ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာတင်ထားတာပါ။ တောက်တိုမယ်ရစာတွေပေါ့။ 67. အိပ်မက်ကမ္ဘာအလည်လီာDreamwalker's Dreamland နည်ရဲဇော် အိပ်မက်ကမ္ဘာ အလည်လာခဲ့ပါ။ ပျော်ရွင်စရာ၊ ၀မ်း နည်းစရာ၊ အစုံအလင်ပေါ့။ 68. မယ်လိုဒီမောင် ၏ MELODY'S... မယ်လိုဒီမောင် ဘလော့ဂ်တွေမှာ လျှောက်လည်တတ်တဲ့ သူတွေရယ် အဝေးရောက်သူငယ်ချင်းများစွာရယ် ကျမ ခံစားချက်တွေ အတွေးအခေါ်တွေ နေထိုင်မှုပုံစံတွေရယ်ကို ကျမဘလော့ဂ်လေးမှာ လာလည်ခြင်းအားဖြင့် အနေဝေးပေမဲ့ စိတ်ချင်းနီးစေဖို့ပါ။ ပြီးတော့ လာလည်တဲ့သူအားလုံး တခုခုတော့ ရသွားစေချင်ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ခဲ့ ပေမဲ့ လဲ ခင်မင်သွားကြပြီး ကိုယ်ကူညီခွင့် ရှိသမျှကူညီပေးရင်း စစ်မက်ကင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာ ရှင်သန်ချင်သူပါ။ 69. ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ for all my lovely friends forgetme ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများအတွက် ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ စာပေ၊ နည်းပညာ၊ အိုင်တီ၊ ကူးယူရန် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များနဲ့ အခြားနေရာများကို ဒီနေရာလေးကနေ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်.. 70. မျက်လုံး MyatLone မျက်လုံး ဘလော့ဂ် အစုံသုတ်ပါ။ သီချင်းတွေ၊ တွေးမိတာတွေ၊ ၀ါသနာအရ ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီတွေ၊ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်တွေပါခင်ဗျာ။ တတ်နိုင်သမျှ လာဖတ်သူတွေ စိတ်မပျက်အောင်တော့ ကြိုးစားထားပါတယ်။ တစ်ခါလောက် လာကြည့်ပါဦး။ 74. အားလုံးကိုပျော်စေချင်သူ let's make someone happy ကိုမျိုးအောင် တစ်ခုခု အဆင်ပြေတာရသွားစေချင်ပါတယ်.
လာလည်ပါနော်...။ 78. သမုဒယ Thamudaya သမုဒယ စာရေးချင်သူသက်သက်သာဖြစ်၍.. တွေမြင်ထိသိခဲ့သည်များကို..ရေးရန်ရည်ရွယ်၍..အထီးကျန်ချိန်များကို
လွတ်လပ်စွာစာရေးသားခြင်းဖြင့် ပျော်မွေ့ချင်သူ... 81. ငါမင်းတို့ကိုပျော်စေချင်တယ် I want to make you happy! စုလတ် ငါမင်းတို့ကိုပျော်စေချင်တယ် 82. မြန်မာအိုင်တီ အဘိဓါန် Myanmar IT Dictionary MMITDictionary Team Myanmar online IT references for all Myanmar. Kindly request to take part all my brothers & sisters in this non-profit IT development for our future generations.
(It isabrother blog of sharingtofrds.blogspot.com). 83. လောရှည်ကတဲ့ပွဲ Law Shay's Opera လောရှည် အရပ်ကရှည်ရှည်၊
(ဇာတ်ရုံအတွင်းသို့ အစားအသောက်များ ယူဆောင်ခွင့်ပြုသည်။) 84. နီယို့ အော်ပရာ Neo's Opera နီယိုလော ဇာတ်ရုံအတွင်းသို့ အစားအသောက်များ ယူဆောင်ခွင့်ပြုသည်။ 89. ဆေးကျောင်းသား မှတ်စုများ Myanmar Medical Student's blog ထူးလမင်း Blog လုပ်ရတာဝါသနာပါတဲ့ ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက်။ ဆေး(၁) ကအကြောင်းတွေ။ စာမေးပွဲတွေ။ ကျောင်းစာတွေ။ သူငယ်ချင်းတွေ။ အတွေးအမြင်တွေ။ အတွေ့အကြုံတွေ။ 99. တေဇာ ရဲ့ မှတ်စုများ Reaper's Death Notes tayzar44 A blog about funny, music, sharing knowledge, blogging, technology and others ... so nothing special. 106. NyanOo.com အရှင်ဉာဏိက 114. အပိုင်းအစများ stories မယ်ကိုးapart of life 115. ရွှေပြည်သူ ShwePyiThu ရွှေပြည်သူ ရွှေပြည်သူ Blog 120. မော်တာဒီဇိုင်း Motor Design for Myanmar ဘလူးဖီးနစ် မော်တာ ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်းများကို မြန်မာများသိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ 121. မြန်မာပြည်အတွက် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် Engineer for Myanmar ဘလူးဖီးနစ် မြန်မာပြည်သား အင်ဂျင်နီယာများကို ကူညီရန်၊ နည်းပညာနှင့် စာအုပ်များ ဝေငှရန်၊ ရည်ရွယ်ပါသည် 122. ဘလူးဖီးနစ် bluephoenix ဘလူးဖီးနစ် home page သဖွယ်လင့်များစုစည်းထားပါသည်။ 124. မြန်မာ-ချစ်ချတ် Myanmar-ChitChat MMCC Everything concerned with Myanmar entertainment, models, cartoons, and funny stuffs.
မြန်မာ့ အလှ မော်ဒယ် ဂယ် လေး များ အ ကြောင်း [ Previous Page | Current Page # 002 | Next Page ] [ Font Download | Font Layout | Font Installation ] [ Contact Us | Register | CopyRight @ | Authors | Rules ]
A member of Ayinepan.com Network Copyright © 2006, Ainmat.com